Hutano, 03 Zvita 2017
Svondo 3 Zvita 2017
Zvita 03, 2017
Vakaremara Vocherechedza Zuva Ravo Vachiti Hapana Zvikuru Zviri Kuitwa neHurumende
Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revakaremara, reInternational Day of Persons with Disabilities, vakaremara vachiti kunyange vachicherechedza zuva iri, hapana zvikuru zviri kuitwa nehurumende kurerutsa hupenyu hwavo
Mbudzi 28, 2017
Father Mukonori Vanotaura Zvaiitika Nguva Yavaiyananisa VaMugabe neMauto
Vaive mutongi gava panhaurirano dzekuti vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugave vasiye basa, Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic, vanoti Amai Grace Mugabe vaimbopindawo munhaurirano daiitwa pakati pemauto naVaMugabe.
VaTimothy Stamps Vanoshaya
Imwe nhengo ye Zimbabwe Association of Doctor’s for Human Rights, Dr Nicholas Wazadza, vati nyika yarasikirwa zvikuru nenyanzvi munyaya dzezveutano.
Mbudzi 21, 2017
Studio7 Inotarisa Nhoroondo yaVaMugabe
Vanga vari mutungamiri wenyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, VaRobert Mugabe, vazivisa mutauriri weparamende, VaJacob Mudenda, kuti vasiya basa.
Mbudzi 20, 2017
VaMugabe Votsamwisa Vakawanda Zvichitevera Kurambira Kwavo paChigaro
Mumwe mugari, VaEmmerson Madzana, vati sevamwe vatungamiri vose vane nhoroondo yekutonga nedemo, hazvishamise kuti VaMugabe vakaratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro.
Vazhinji Vachakangomirira Kuti VaMugabe Vati Vasiya Basa
Zvizvarwa zve Zimbabwe zvizhinji zvinogara kunze kwenyika zvakange zvakatarisira kunzwa mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachitaura vega kuti vave kuzoregedza basa asi hazvina kuitika.
Mutevedzeri weGurukota rezveHutano Dr. Musiiwa Vanoshaya Vari kuIreland
Mutewedzeri wegurukota rezvehutano pamwe nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, Doctor Aldrin Musiiwa vakashaya nemusi weChishanu vari kuDublin, ku Ireland uko vakanga vaenda kumusangano nevamwe vebazi rezvehutano.
Mbudzi 14, 2017
Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechirwere cheshuga, reWorld Diabetes Day.